Qaabka Muuse dhululubada ah Xiinka udugga Diffuser - Design fiican & Sameeyo Co., Ltd
Ku raaxayso aragnimada udugga kama dambaysta ah la Qaabka Muuse dhululubada ah Xiinka Diffuser udugga ah. Powered by xadhig awood (waxaa ka mid ahaa), design dhimatay this diffuser cute yar ee ka dhigayaa fiican ee qolka kasta. Tani diffuser udugga ultrasonic ogolaan doonaa inaad si ay u damiyaan saliidaha aad ugu jeceshahay lagama maarmaanka ah ee miiska aad shaqada, Dhinaca sariirta ama meel kale oo yar yar oo kasta. Astaamaha Laba goobaha heerka ceeryaamo waddaa 4-6 Saacadaha (waqti Orod kala duwan iyadoo ku xiran meesha ceeryaamo isticmaalo) Moisturize ...
Ku raaxayso aragnimada udugga kama dambaysta ah la Qaabka Muuse dhululubada ah Xiinka Diffuser udugga ah. Powered by xadhig awood (waxaa ka mid ahaa), design dhimatay this diffuser cute yar ee ka dhigayaa fiican ee qolka kasta. Tani diffuser udugga ultrasonic ogolaan doonaa inaad si ay u damiyaan saliidaha aad ugu jeceshahay lagama maarmaanka ah ee miiska aad shaqada, Dhinaca sariirta ama meel kale oo yar yar oo kasta.